Noocyada dhirta korontadu: hawlgalka iyo utility | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 26/04/2022 12:00 | Tamarta Caadiga ah
Korontadu waa arin dabiici ah oo siyaalo kala duwan ugu dhici karta dhirta korontada. Su'aasha ku saabsan asalka korantada ma fududa: in loo isticmaalo tamar ahaan, waa inay safar dheer u socotaa. Dhanka kale, awoodooda wax-soo-saar iyo heerkooda wax-ku-oolnimo, taas oo ah, xadiga korontada ay ka soo saari karaan beddelka tamarta aasaasiga ah, waxay ku xirnaan doontaa alaabta ceeriin iyo farsamada la isticmaalo. Tani waa sababta ay dhirta korontadu ugu xirnaan doonto tamarta. Spain, ugu weyn noocyada dhirta korontada Waxay yihiin kulaylka, nukliyeerka, jawiga iyo iftiinka qorraxda.
Maqaalkani waxa aanu kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee dhirta korontada ee jira iyo sifooyinkooda.
1 Noocyada dhirta korontada
1.1 Warshada tamarta kulaylka
1.2 warshad dabaysha
1.3 warshada tamarta qoraxda
1.4 warshad koronto
1.5 Saldhig koronto
2 Sida noocyada dhirta korontadu u shaqeeyaan
3 Muhiimadda dab-demiska nukliyeerka
Warshada tamarta kulaylka
Marawaxadaha dhirtaas waxay bilaabaan inay dhaqaaqaan sababtoo ah jets uumiga oo la cadaadiyo oo lagu helo kuleylka biyaha. Dhirta kuleylku waxay soo saaraan koronto siyaabo kala duwan: waxaa ka mid ah kulaylka
Heerka: Waxa ay tamartooda ka helaan shidaalka gubanaya.
Laga soo bilaabo biomass: Waxay tamartooda ka helaan kaymaha gubanaya, hadhaaga beeraha ama dalagyada tamarta ee caanka ah.
Laga soo bilaabo gubashada qashinka adag ee dawladda hoose: Waxay tamar ku helaan iyagoo gubaya qashinka la daweeyay.
dhirta tamarta nukliyeerka: Waxay tamar ka dhaliyaan falcelinta fission ee atamka uranium-ka. Dhanka kale, kuleyliyeyaasha biyaha cadceedu waxay kuleyliyaan biyaha iyagoo xooga saaraya tamarta qoraxda, ugu dambeyntii, dhirta geothermal waxay ka faa'iideystaan ​​kulaylka gudaha dhulka.
Marka ay dabayshu ku dhaqanto marawaxadaha marawaxadaha dabaysha, marawaxadaada ayaa dhaqaaqaysa. Si arrintan loo sameeyo, rotor leh dhowr daab ayaa lagu rakibay qaybta sare ee munaaradda, kuwaas oo ku jihaysan jihada dabaysha. Waxay ku wareegaan dhidib siman oo ku shaqeeya koronto dhaliyaha. Hawlgalkeeda waxaa xaddidaya xawaaraha dabaysha, beeraha dabaysha ayaa u baahan dhul ballaaran. Dhanka kale, Spain. saacadaha shaqada ee korontadu waa inta u dhaxaysa 20% iyo 30% sanadka, qiimo hoose marka loo eego kuwa kulaylka iyo tamarta nukliyeerka, kuwaas oo gaaraya 93%.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la xasuusnaado in ay tahay il tamar nadiif ah oo rakibaadahani ma keenaan wax dhaawac ah deegaanka. Beerta dabaysha ee lagu rakibay dekedda Bilbao ee Ponta Lucero waxay Spain ka soo saartay 7,1 milyan kWh oo tamar dabaysha ah shantii bilood ee ugu horreysay ee shaqada. Waxaa faa'iido badan leh in seerahaas ay dhistaan ​​baddu. maadaama ay hawadu u janjeerto inay ku wareegto qarax oo ay ka xasilloon tahay dhulka.
warshada tamarta qoraxda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah warshadaha korontada. Waxa ka mid ah, dhirta kulaylka cadceedda ka faa’iidaysata kulaylka qoraxda si ay biyaha u kululeeyaan una adeegsadaan uumiga ka soo baxa kulaylku si ay u dhaqaajiyaan marawaxadaha. Waxa kale oo jira dhirta tamarta qoraxda ee photovoltaic, tan iyo Unugyada Photovoltaic ayaa mas'uul ka ah inay tamarta qorraxda u beddelaan koronto.. Spain waxaan ku leenahay laba warshadood oo muhiim ah: Puertollano iyo Olmedilla de Alarcón photovoltaic parks. Labaduba waxay ku sugan yihiin Castilla-La Mancha.
Marawaxada dhirtan waxa kaxeeya socodka biyaha oo aad u sareeya. Kuwani waxay ka faa'iidaystaan ​​biyo-dhacyada, hadday yihiin kuwo dabiici ah, taas oo ah, biyo-dhacyada iyo webiyada, ama biyo-dhacyada macmalka ah ee lagu dhex daray kaydadka. Marka lagu daro tamarta korontada awood u leh inay wax soo saaraan, sidoo kale waa loo qaybiyaa ama loo kala saaraa hadba awoodda ay leeyihiin. Dhinac waxaa ku yaal dhirta waaweyn ee koronto-dhaliyaha, dhirta yar yar ee koronto-dhaliyaha iyo dhirta koronto-dhaliyaha yar yar.
Shaqadeedu waxa ay la mid tahay dhirta korontada laga dhaliyo. Laakiin kuwani waxay ka faa'iidaystaan ​​farqiga u dhexeeya heerka badda ee u dhexeeya hirarka sare iyo kuwa hooseeya. Dhirta tamarta dabaysha ayaa sidoo kale loo arkaa kuwa ka faa'iidaysta dhaqdhaqaaqa hirarka si ay u dhaqaajiyaan marawaxadaha. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira mawjadaha badda, kuwaas oo ka faa'iideysanaya tamarta kinetic ee qulqulka badda ama badda. Habkani wuxuu leeyahay saameyn yar oo deegaanka ah sababtoo ah ma jiraan wax biyo xireeno ah oo loo dhisay si ay u carqaladeeyaan nidaamka deegaanka.
Sida noocyada dhirta korontadu u shaqeeyaan
Warshada tamarta kulaylka waa warshad koronto kuleyl ah oo ujeeddadeedu tahay in tamarta kulaylka loo beddelo koronto. Bedelkan waxaa lagu sameeyaa wareegga marawaxadaha biyaha uumiga/kuleylka. Taasi waa meertada Rankine. Xaaladdan oo kale, isha uumiga ayaa soo saari doona uumiga wada marawaxadaha.
Hal nooc oo ka mid ah warshadda tamarta kulaylka waa wareegga isku dhafan. Warshada wareegga isku-darka ah waxaa jira laba wareegyo-thermodynamic:
Wareega Breton. Wareeggani wuxuu la shaqeeyaa marawaxadaha gaaska gubanaya, badanaa gaaska dabiiciga ah.
Wareegga darajada. Tani waa wareegga marawaxadaha uumiga-biyaha caadiga ah.
Dhammaan xarumaha tamarta kulaylka, saddex walxood ayaa loo baahan yahay si ay u dhaliyaan koronto:
marawaxadaha uumiga. Turbinadu waxay tamarta kulaylka u beddelaan tamar kinetic ah.
beddelka beddelka tamarta farsamada galay tamarta korontada.
Transformer oo wax ka beddelaya hadda la helay beddelka hadda jira kala duwanaanshaha la doonayo.
Muhiimadda dab-demiska nukliyeerka
Dareen-celinta fiyuuska waa xarun ay fal-celinta isku-dhafka nukliyeerka ay ka dhacaan shidaal ka samaysan hydrogen isotopes (deuterium iyo tritium), oo sii daaya tamarta qaab kuleyl ah, kaas oo markaas ayay koronto isu beddeshaa.
Hadda ma jiraan reactors fiyuusyo soo goosan kara koronto, inkasta oo ay jiraan goobo cilmi-baadhiseed oo lagu daraaseeyo falcelinta isku-dhafka ah iyo farsamada mustaqbalka loo isticmaali doono dhirtaas.
Mustaqbalka, reactors fusion waxa loo qaybin doonaa laba nooc: kuwa isticmaala xannibaadda magnetic iyo kuwa isticmaala xannibaadda aan shaqaynayn. Reactor fusion magnetic wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda:
Qol falcelin ah oo ku xidhan darbi bir ah.
Haddii loo malaynayo in shidaalka qolka falcelinta uu yahay deuterium-tritium, lakabka walxo ka samaysan lithium kaas oo ka soo jiidaya kulaylka darbiyada birta oo soo saara tritium.
Qaar ka mid ah gariiradaha waaweyn waxay dhaliyaan dhul birlabeedka.
Nooc ka mid ah ilaalinta shucaaca.
Dareen-celinta isku-xidhka-xiran ee inertial waxaa ka mid noqon doona:
qolka falcelinta, ka yar kii hore, waxa kale oo xaddiday darbiyada birta ah.
Waxaa loo isticmaalaa fududeeyo dhexgalka ee qurub iftiin iftiin ama ions ka laser.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto noocyada dhirta korontada ee jira iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Noocyada dhirta korontada